HomeWararka CiyaarahaPep Guardiola oo ka codsaday Manchester City saxiixa Dani Olmo
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa doonaya inuu lasoo saxiixdo kubad sameeyaha RB Leipzig Dani Olmo xagaaga soo aadan.
24 jirka reer Spain ayaa ku soo baxay mid ka mid ah xiddigaha loogu doonista badan yahay weerarka khadka dhexe ee qaarada yurub kadib markii uu qaab ciyaareed fiican ku soo bandhigay kooxda iyo wadankiisa xilli ciyaareedyadii u dambeeyay.
Sida laga soo xigtay Calciomercato Olmo waxa uu raadinayaa inuu ka tago Leipzig oo uu ku biiro koox weyn mid ka mid ah Suuqa kala iibsiga ee soo socda, taas oo digniin u dirtay kooxo badan oo Yurub ah.
Barcelona , Manchester United iyo Liverpool ayaa la rumeysan yahay inay xiriir la sameeyeen kooxda Jarmalka horaantii xilli ciyaareedkan, taasoo ku saabsan helitaanka Olmo, Man City ayaana haatan ah kooxdii ugu dambeysay ee wax ka weydiisay Guardiola.
Tababaraha Isbaanishka ah ayaa damacsan inuu ku soo daro shaxdiisa aadka u xoogan, waxaana uu Olmo u aqoonsaday mid ka mid ah bartilmaameedyadiisa ugu sareeya, maadaama uu aaminsan yahay in ciyaaryahanka khadka dhexe uu ku haboon yahay nidaamka kooxdiisa.
Olmo – oo qandaraas kula jira Leipzig ilaa June 2024 – ayaa dhaliyay toddobo gool, waxaana uu caawiyay 12 gool 46 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkii hore, laakiin waxa uu kaliya saftay lix jeer ilaa hadda ololahan sababo la xiriira dhaawac muruqa ah.